घर छाडेको ४७ वर्षपछि सम्पर्कमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
घर छाडेको ४७ वर्षपछि सम्पर्कमा !
लमजुङ, साउन १४ । घर छोडेर गएको ४७ वर्षपछि एक वृद्ध फेरि घर फर्किएका छन् । जिल्लाको बेँशीशहर नगरपालिका-२ भकुण्डेका प्रेमबहादुर खड्का ४७ वर्षपछि घर फर्किएका हुन् । करीब पाँच दशकसम्म घर परिवारसँग सम्पर्कविहीन खड्का बुढ्यौलीसँगै अशक्त अवस्थामा पुगेपछि सोधखोज गर्दै गाउँसम्म आई पुगका बताइएका छ ।
याे पनि पढ्नुस कुखुरा आयातमा पनि कर
प्रेमबहादुरको उमेर ७० वर्ष नाघे पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता छैन । २००४ साल वैशाख १४ गते आफ्नो जन्ममिति भएको बताउने खड्का बाल्यकालदेखि नै काम सिलसिलामा भारतमा रहे पनि २०२८ सालमा बुबा चन्द्रबहादुर बित्दा जम्मा १४ दिन काजकिरियाको लागि घर आएका थिए ।
बुबा बितेपछि आमा पनि अन्यत्र विवाह गरेर गएको बताउने खड्का अहिले सौतेनी आमापट्टिका छोराअर्थात् भाइ तिलकबहादुर खड्काको परिवारसँग बसेका छन्। खड्काले आफू अहिलेसम्म अविवाहित नै रहेको बताए ।
धेरै वर्षपछि घर फर्कने क्रममा भारतकै मेघालयमा कुटपिटका साथै लुटिएको खड्काले दुःखेसो पोखे। सातजनाको समूहले उनको साथमा रहेको २३ हजार भारतीय रुपैयाँसमेत लुटेको उनले बताए । कुटपिट गरेर जंगलमा फालिएका प्रेमबहादुरलाई मेघालयका स्थानीयले फेला पारेर बचाएका थिए । -रासस
याे पनि पढ्नुस भर्याङबाट लडेर माओवादी केन्द्रका नेताको मृत्यु
ट्याग्स: lamjung, Preambadhuar khadka, प्रेमबहादुर खड्का